MW CMC Oo Boqorada Belgiumka Soo Dhaweeyay - Cakaara News
MW CMC Oo Boqorada Belgiumka Soo Dhaweeyay
Jigjiga(CN) Talaado, 10ka November, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliyaan mas'uuliyiin sare oo xukuumada DDSI ah ayaa saaka si heer sare ah gagida caalamiga ah ee Garaad wiil-waal ugu soo dhaweeyay boqorada dalka Belgiumka ahna madaxwayne sharafeedka Unicef marwo Mathilde iyo wafti ay hogaaminayso oo deegaanka booqasho kusoo gaadhay.
Hadaba soo dhawayn kadib ayay boqoradu kulan kooban kulaqaadatay madaxwaynaha guriga nasashada ee goobta soo dhawaynta iyadoo booqashada boqorada marwo mathilde ay muhiimadeedu ahayd is barasho xukuumada DDSI ah iyo ogaansho waxqabadka unicef ay deegaanka kawado.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo kulankan kahadlay ayaana ugu horayn kusoo dhaweeyay boqorada iyo waftigeedaba gacmo furan uguna hambalyeeyay in xukuumada DDSI aad ugu faraxsan tahay imaanshaha boqoradu soo booqatay dalka gaar ahaana deegaanka soomaalida itoobiya isagoo kawarbixiyay waxqabadka Unicef oo sheegay in kaalin laxaadleh ay kaqaadato horumarka deegaanka kahanaqaaday haday noqoto dhanka caafimaadka, biyaha iyo waxbarashadaba gaar ahaana waxqabadka kooxaha wareega ee caafimaadka, xiliyada gurmadka deg-dega ah uu jiro sida abaaraha, qodida ceelasha iyo caawinta iskuulada dhamaanba. waxaa intaa dheer oo uu qeexay madaxwaynuhu in xidhiidh wada shaqayn oo qorshe, qiimayn, islaxisaabtan iyo waxqabad kusalaysan ay Unicef laleedahay xukuumada.
Kadibna, Boqorada dalka belgiumka ahna madaxwayne sharafeedka Unicef marwo mathilde ayaa aad ubogaadisay soo dhawaynta diiran ee ay xukuumada DDSI usamaysay oo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay imaanshaha dalka siiba deegaanka iyadoo sheegtay in muhiimada booqashadeedu ahayd inay wax ka ogaato waxqabadka iyo deeqaha Unicef ay deegaanka siiso. waxayna ugu mahadcelisay xukuumada oo ugu horeeyo madaxwaynaha waxqabadka unicef ee uu kawarbixiyay, wadashaqaynta adag ee ay wada leeyihiin hay'ada iyo xukuumadu.
Ugudanbayna, waxaa baryahan danbe deegaankeena kusoo badanaya booqashada madaxda caalamku ku imanayso deegaaanka haba udanbayso tii madaxwaynaha dalka Swiss marwo Simmonetta taas oo cadayn u ah in horumarka iyo nabadgelyada taala deegaanka soomaalida uu soo jiidanayo indhaha beesha caalamka.